गरीबी र उदारता, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
कोरिन्थीहरूलाई लेखेको दोस्रो पत्रमा उनले आनन्दको अनमोल उपहारले विश्वासीहरूको जीवनलाई कसरी व्यावहारिक ढ affects्गमा प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेमा उत्कृष्ट विवरण दिए। "तर प्रिय भाइहरू, म्यासिडोनियाका समुदायहरूमा दिइने परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी तपाईंहरूलाई घोषणा गर्दछौं" (१ कोर .2.११) पावलले एउटा सानो रिपोर्ट मात्र गरेनन - कोरिन्थका भाइबहिनीहरूले थेसलोनिकाको चर्चलाई पनि परमेश्वरको अनुग्रहको प्रतिक्रिया देखाउन चाहन्थे। उनी उनीहरूलाई परमेश्वरको उदारताको सही र फलदायी उत्तर दिन चाहन्छन्। म्यासिडोनियावासीहरू “अत्यन्तै थिचोमिचोमा परेका” र “अत्यन्त गरीब” थिए भनेर पावल उल्लेख गर्दछन् - तर उनीहरूसँग “उत्साहित आनन्द” पनि थियो। (V. 2) उनको खुशी स्वास्थ्य र समृद्धि सुसमाचारबाट आएको छैन। उनीहरूको ठूलो आनन्द धेरै पैसा र सामान पाएर भएन, तर उनीहरूसँग थोरै भए पनि!
उनको प्रतिक्रियाले "अरू संसारबाट" केहि देखाउँदछ, अलौकिक, केहि स्वार्थी मानवताको प्राकृतिक संसार भन्दा परको कुरा, यस संसारको मूल्यहरु द्वारा वर्णन गर्न सकिदैन भन्ने कुरा: "किनकि जब उनी धेरै कष्टको बीचमा प्रमाणित भइन् तब उनको खुसी खुशी थियो। र, ती गरिब भएता पनि, तिनीहरूले सबै सरलतामा प्रशस्त मात्रामा दिएका छन् » (V. 2) यो अद्भुत छ! गरीबी र आनन्दको संयोजन गर्नुहोस् र तपाइँले के पाउनुहुन्छ? प्रचुर मात्रामा दिने! यो उनको प्रतिशत दिने थिएन। "किनभने मैले गवाही दिन सक्ने जति कडा छ, र तिनीहरूले स्वेच्छाले आफ्ना शक्तिको बारेमा पनि दिए" (V. 3) तिनीहरूले "उचित" भन्दा बढी दिए। तिनीहरूले बलिदान दिए। "त्यसो भए पर्याप्त भएन भने," हामीले उनीहरूलाई विश्वस्त भई सोध्यौं कि उनीहरूले सन्तहरूको सेवामा आशिष्‌ र भोजमा सहयोग पुर्‍याउन सक्नेछन्। " (V. 4) तिनीहरूको गरिबीमा तिनीहरूले पावललाई व्यावहारिक भन्दा बढी दिने मौका मागे!
म्यासिडोनियाका विश्वासीहरूमा परमेश्वरको अनुग्रहले यसरी नै काम गर्यो। यो येशू ख्रीष्टमा उनीहरूको ठूलो विश्वासको गवाही थियो। यो उनीहरूको आत्मिक शक्तिले अरु मानिसहरूलाई प्रेम गरेको प्रमाण हो - यो कोरिन्थीहरू जान्न र अनुकरण गर्न पावल चाहन्थे भन्ने कुराको गवाही हो। यदि आज हामीमा पवित्र आत्माले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन सक्दछौं भने यो पनि हाम्रो लागि केही कुरा हो।
प्रभुलाई सबैभन्दा पहिला
म्यासिडोनियालीहरूले किन "यस संसारबाट" केही गरे? पावल भन्छन्: "... तर तिनीहरूले आफैलाई दिए, पहिले प्रभुलाई र त्यसपछि हामीलाई, परमेश्वरको इच्छा अनुसार।" (V. 5) तिनीहरूले यो काम परमप्रभुको सेवामा गरे। तिनीहरूको बलिहरू परमप्रभुको लागि पहिलो थियो। यो अनुग्रहको काम थियो, उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको काम र तिनीहरूले पत्ता लगाए कि उनीहरू यो गर्न खुशी थिए। तिनीहरूमा पवित्र आत्माको जवाफ दिँदै तिनीहरू जान्दछन्, विश्वास गर्दछन् र त्यसरी व्यवहार गर्दछन् किनकि जीवन भौतिक चीजहरूको प्रशस्तताले मापन हुँदैन।
यदि हामी यस अध्यायमा पढ्छौं, हामी देख्न सक्छौं कि कोरिन्थीहरूले पनि त्यसो गरेको पावल चाहन्थे: «यसैले हामीले तीतसलाई मनायौं जुन उनले सुरु गरिसकेका थिए र अहिले यो आशिष्‌ पूर्णतया तपाईंमा गरिरहेछन्। तर जसरी तपाईं हामी सबै समूहमा विश्वासका साथ, वचनमा र ज्ञानमा र हामीमा ब्यूँझिएको सबै जोस र प्रेममा धनी हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो लाभको साथ प्रशस्त मात्रामा दिनुहोस् give (V. 6-7)
कोरिन्थीहरूले आफ्नो आध्यात्मिक धनको घमण्ड गरे। उनीहरूसँग धेरै चीजहरू थिए, तर तिनीहरूले दिएनन्! उनीहरूले उदारतामा बढेको पावल चाहन्थे किनकि त्यो ईश्वरीय प्रेमको अभिव्यक्ति हो, र प्रेम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
तर पावललाई थाँहा छ कि एक व्यक्तिले जतिसुकै दिऊँ, त्यसले कुनै फाइदा गर्दैन तर उदारको सट्टा मनोवृत्तिले आक्रोशित छ भने (१ कोर .1.११) त्यसकारण उनी कोरिन्थीहरूलाई धम्काउन चाहँदैनन्, उनीहरूलाई दिन हिचकिचाउन चाहन्छन, तर उनीहरुमा तिनीमाथि थोरै दबाब दिन चाहन्छ किनकि कोरिन्थीहरूको व्यवहार अपेक्षाको अभावमा परेको थियो र उनीहरूलाई यो कुरा बताउनु परेको थियो। «म यो आदेशको रूपमा भन्न सक्दिन; तर किनभने अरुहरु अति उत्सुक छन्, मँ पनि तपाइँको माया लाई जाँच गर्छु कि यो सहि दयालु छ कि छैन » (१ कोर .2.११)
येशू, हाम्रो पेसमेकर
कोरिन्थीहरूले घमन्ड गरेको कुरामा वास्तविक पादरीहरू भेट्टिएनन् - यो येशू ख्रीष्टको सिद्ध मानकले मापन गर्दछ जसले सबैको लागि आफ्नो जीवन दियो। त्यसकारण पावलले कोरिन्थको चर्चमा देख्न चाहेको उदारताको ईश्वरतान्त्रिक प्रमाणको रूपमा येशू ख्रीष्टको मनोवृत्ति प्रस्तुत गरे: «किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहलाई तपाईं जान्नुहुन्छ: उहाँ धनी हुनुहुन्छ, तर ऊ तपाईंको खातिर गरिब भयो, ताकि तपाईको मार्फत जानुहोस्। उसको गरिबीलाई धनी बनाउनेछ '» (V. 9)
पावलले उल्लेख गरेको धन भौतिक धन होइन। हाम्रो खजाना शारीरिक खजाना भन्दा असीम ठूला छन्। तपाईं स्वर्गमा हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि आरक्षित। तर अहिले पनि यदि हामीले पवित्र आत्मालाई हामीभित्र काम गर्न अनुमति दियौं भने हामीले ती अनन्त धनहरूको थोरै स्वाद लिन सक्दछौं।
अहिल्यै, परमेश्वरका विश्वासी जनहरू परीक्षाहरू, गरीबी समेतबाट पार गर्दै छन् - र यद्यपि, येशू हामीभित्र रहनुहुन्छ, यसकारण हामी उदारतामा धनी हुन सक्छौं। हामी दिंदा उत्कृष्ट हुन सक्छ। हामी न्यूनतम भन्दा बाहिर जान सक्दछौं किनकि अब पनि ख्रीष्टमा हाम्रो आनन्द अरूलाई मदत गर्न ओड्न सक्छ।
येशूको उदाहरणको बारेमा धेरै कुरा भन्न सकिन्छ, जसले अक्सर धनको सही प्रयोगको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यस खण्डमा पावलले यसलाई "गरीबी" को संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछन्। येशू हाम्रो लागि आफूलाई गरीब बनाउन को लागी तयार थियो। यदि हामी उहाँलाई पछ्याउँछौं भने हामीलाई यस संसारका चीजहरू त्याग्न, अरू मूल्यमान्यता अनुरूप बाँच्न र अरूको सेवा गरेर उहाँको सेवा गर्न पनि भनिएको छ।
खुशी र उदारता
पावलले कोरिन्थीहरूलाई आफ्नो अपील जारी राखे: «र यसैले म आफ्नो विचार भन्छु; किनभने यो तपाईका लागि उपयोगी छ, जो तपाईले गत बर्ष शुरु गर्नुभएको थियो मात्र नगर्दै, राजीखुसीले। अब, तथापि, तपाईको इच्छा अनुसार गर्न चाहानुहुने कुरा पनि गर्नुहोस् » (V. 10-11)
"किनभने यदि त्यहाँ राम्रो ईच्छा छ" - यदि उदारताको दृष्टिकोण छ भने - "यो आफुसँग भएको अनुसार स्वागत छ, आफूसित नभएको कुरा हो" (V. 12) पावलले कोरिन्थीहरूलाई म्यासिडोनियालीहरूले जति दिने आज्ञा गरेनन। म्यासिडोनियालीहरूले आफ्नो भाग्य माथि हस्तान्तरण गरिसकेका थिए; पावलले कोरिन्थीहरूलाई केवल उनीहरूको सामर्थ्य अनुसार दिन आग्रह गरे - तर मुख्य कुरा के हो भने उदार भएर स्वैच्छिक हुन चाहन्थ्यो।
पावल अध्याय in मा केही सल्लाह दिंदै यसो भन्छन्‌: “किनभने म्यासिडोनियाका मानिसहरूबाट म तपाईंहरूको भलाइको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भन्छु: अखैया गत वर्ष तयार भइसकेका थिए! र तपाईंको उदाहरणले सबैभन्दा बढी प्रोत्साहित गर्‍यो » (V. 2)
जसरी पावलले कोरिन्थीहरूलाई उदारताका साथ उत्साहित पार्न म्यासिडोनियालीहरूको उदाहरण प्रयोग गरे त्यसरी नै उनले कोरिन्थीहरूको उदाहरण म्यासिडोनियालीहरूलाई प्रेरणा दिन प्रयोग गरे जुन स्पष्टतः ठूलो सफलताको साथ थियो। म्यासिडोनियालीहरू यति उदार थिए कि कोरिन्थीहरूले उनीहरूले भन्दा पहिले गर्न सक्ने कुरा महसुस गरे। तर उनले म्यासिडोनियामा गर्व गरे कि कोरिन्थीहरू उदार थिए। अब उनी कोरिन्थीहरू यो काम सिध्याएको चाहन्छन्। ऊ फेरि सल्लाह दिन चाहन्छ। ऊ केही दबाब दिन चाहन्छ, तर ऊ पीडितलाई स्वेच्छाले दिएको चाहान्छ।
The तर मैले भाइहरूलाई पठाउँदैछु कि हाम्रो प्रशंसनीय कार्य यस टुक्राहरूमा न नष्ट होस्, र जसरी मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ, तिमीहरू तयार भइसकेका छौ, यदि तिनीहरू म्यासिडोनियाबाट मसँगै आए र तिमीलाई तयार नपाए भने। हामी यो भन्न सक्दैनौं: तपाईलाई विश्वासका साथ लाज लाग्नेछ। यसकारण अब मैले दाज्यू-भाइहरू र दिदी-बहिनीहरूलाई तपाईंहरू माझ पहिल्यै जान सकुँ भनेर घोषणा गर्नु आवश्यक छ किनकि तपाईंले घोषणा गरेको आशीर्वाद समाप्त गर्नका लागि ताकि यो आशीर्वादको उपहारको रूपमा तयार होस्, कुकर्मकोलागि होइन। (V. 3-5)
तब त्यहाँ एउटा पद छ जुन हामीले धेरै पटक सुनेका छौं। "प्रत्येक व्यक्ति, उसको दिमागमा जस्तो हो, अनिच्छुकता वा जबरजस्तीको होइन; किनभने भगवान्‌लाई खुसी दिनेलाई loves (V. 7) यो खुशीको अर्थ खुशी वा हाँसो होइन - यसको मतलब यो हो कि हामी अरूसँग आफ्नो चीजहरू बाँड्न रमाईलो गर्दछौं किनकि ख्रीष्ट हामीभित्र हुनुहुन्छ। दिंदा हामीलाई राम्रो लाग्छ। प्रेम र अनुग्रह हाम्रो हृदयमा यस्तो तरिकाले काम गर्दछ कि दिने जीवन बिस्तारै हाम्रो लागि अझ ठूलो आनन्द हुन्छ।
यस खण्डमा पावल इनामको बारेमा पनि कुरा गर्दछन्। यदि हामी स्वतन्त्रता र उदारतासाथ दिन्छौं भने भगवानले हामीलाई पनि दिनुहुन्छ। कोरिन्थीहरूलाई निम्न कुरा सम्झाउन पावल डराउँदैनन्: you तर परमेश्वरले तपाईको बीचमा सबै अनुग्रह प्रशस्त छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईं जहिले पनि सबै कुरामा पूर्ण सन्तुष्टि पाउनुहुनेछ र अझै पनि हरेक असल काममा धनी हुनुहुन्छ » (V. 8)
परमेश्वर हामीप्रति उदार हुनुहुन्छ भनेर पावल प्रतिज्ञा गर्दछन्। कहिलेकाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भौतिक चीजहरू दिनुहुन्छ, तर यो पावलले भन्न खोजेको कुरा होइन। उहाँ अनुग्रहको कुरा गर्नुहुन्छ - क्षमाको अनुग्रहको बारेमा होइन (हामी ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा यो अद्भुत अनुग्रह प्राप्त गर्छौं, उदारताका कामहरू द्वारा होइन) - पावलले बताउन सक्ने अन्य थुप्रै प्रकारका अनुग्रहको बारेमा पावल बोले।
यदि परमेश्वरले म्यासिडोनियाका मण्डलीहरूलाई थप अनुग्रह दिनुहुन्छ भने उनीहरूसँग पहिले भन्दा थोरै पैसा हुनेथियो - तर धेरै आनन्द! कुनै पनि समझदार व्यक्ति, यदि तिनीहरूले छनौट गर्नुको सट्टा, खुशीको साथ गरीव संग खुशी संग धन भन्दा गरीबी हुनेछ। आनन्द ठूलो आशिष्‌ हो, र परमेश्वरले हामीलाई ठूलो आशिष्‌ दिनुहुन्छ। केही इसाईहरूले दुबै पाउँदछन् - तर ती दुवैको काम अरूको सेवा गर्न प्रयोग गर्नु पनि उत्तरदायित्व हुन्छ।
त्यसपछि पावलले पुरानो नियमबाट उद्धरण गरे: "उनले फैलाए र गरिबहरूलाई दिए" (V. 9) ऊ कस्तो खालको उपहारको बारेमा कुरा गरिरहेको छ? "उहाँको धार्मिकता सदा रहन्छ"। न्यायको वरदानले ती सबैलाई पछ्याउँछ। परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिने वरदान - यो उपहार हो जुन सदाको लागि रहन्छ।
परमेश्वर उदार हृदयलाई इनाम दिनुहुन्छ
"तर जसले बीउ छर्नेलाई र खानेकुराको लागि रोटी दिन्छ, उसले तिमीलाई बीउ र गुणा दिन्छ र उसलाई तपाईंको धार्मिकताको फल उमार्न दिनेछ"। (V. 10) न्यायको फसलको बारेमा यस अन्तिम वाक्यांशले हामीलाई चित्रण प्रयोग गर्दछ भनेर देखाउँदछ। ऊ शाब्दिक बीजको प्रतिज्ञा गर्दैन तर उसले भन्छ कि परमेश्वरले उदार मानिसलाई इनाम दिनुहुन्छ। उहाँ तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ कि उनीहरूले अझ बढी दिन सक्दछन्।
उसले परमेश्वरको उपहार प्रयोग गर्नेलाई अझ धेरै दिनेछ। कहिलेकाँही ऊ उही तरीकाले फर्काउँछ, अन्नको लागि अन्न, पैसाको लागि पैसा, तर सधैं हुँदैन। कहिलेकाँही उसले बलिदान दिंदा बदलामा हामीलाई असीम आनन्द दिन्छ। उसले सधैं उत्तम दिन्छ।
कोरिन्थीहरूलाई चाहिने सबै कुरा हुनेछ भनेर पावलले भने। कुन उद्देश्यका लागि? ताकि तिनीहरू every सबै राम्रो काममा धनी »। उनी पद १२ मा पनि त्यस्तै भन्छन्: "किनकि यस संग्रहको सेवाले सन्तहरूको कमीलाई मात्र समाधान गर्दैन, धेरैले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछन् भन्ने तथ्यलाई पनि यसले विस्मयकारीपूर्वक काम गर्दछ।" हामी भन्न सक्छौ कि परमेश्वरको उपहारहरू सर्तका साथ आउँदछन्। हामीले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ, तिनीहरूलाई कमान्डमा नलुकाउनुहोस्।
जो धनी छौ उसले राम्रो कामकोलागि धनी हुनु पर्छ। "यस संसारका धनीहरूलाई आदेश दिनुहोस् कि उनीहरू गर्व गर्दैनन्, र अनिश्चित धनको लागि आशा गर्दैनन्, तर ईश्वरका लागि, जसले हामीलाई सबै कुरा प्रदान गर्नका लागि प्रदान गर्नुहुन्छ; कि तिनीहरूले राम्रो काम गर्छन्, राम्रो काममा धनी बन्नेछन्, जस्तै दिनुहोस्, सहयोगी हुनुहोस् » (१ तिमो 1: १-6,17-१-18)
यस्तो अनौंठो व्यवहारको लागि के इनाम छ, जो मानिससँग धनसँग जोडिएको छैन केहि चीज मान्नु पर्ने तर यसलाई स्वेच्छाले कसले छोडिदिन्छ? "यस तरिकाले उनीहरूले भविष्यको राम्रो कारणको रूपमा धन भण्डार गर्दछन् ताकि तिनीहरूले वास्तविक जीवन लिन सक्दछन्"। (V. 19) यदि हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौं भने, हामी वास्तविक जीवनको जीवनलाई लिनेछौं।
साथीहरु, विश्वास सजिलो जीवन छैन। नयाँ करारले हामीलाई आरामदायी जीवनको प्रतिज्ञा गर्दैन। यसले हाम्रो लगानीको लागि १ लाख भन्दा बढी अनन्तसम्म प्रस्ताव गर्दछ - तर यसले यस अस्थायी जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण पीडितहरूलाई समावेश गर्न सक्दछ।
र अझै पनी यस जीवन मा ठूलो पुरस्कार छन्। परमेश्वरले बाटोमा प्रशस्त अनुग्रह दिनुहुन्छ (र उहाँको असीम बुद्धिमत्तामा) कसरी ऊ जान्छ कि यो हाम्रो लागि सबै भन्दा राम्रो हो। हाम्रो परीक्षा र आशिष्‌हरूमा हामी उहाँमा हाम्रो जीवन सुम्पन सक्छौं। हामी उहाँलाई सब थोक सुम्पन सक्छौं, र यदि हामी गर्छौं भने, हाम्रो जीवन विश्वासको गवाही हुनेछ।
भगवान्‌ले हामीलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि हामी पापी र शत्रु भएको बेलामा पनि उहाँले आफ्नो छोरालाई मर्न पठाउनुभयो। किनकि परमेश्वरले हामीलाई पहिले नै यस्तो प्रेम देखाइसक्नुभएको छ, हामी निर्धक्क भई उहाँलाई हाम्रो हेरचाह गर्न विश्वास गर्न सक्छौं, हाम्रो दीर्घकालीन भलाइको लागि, अब हामी उहाँका सन्तानहरू र साथीहरू हौं। हामीले "हाम्रो" पैसा कमाउने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन।
हामी २ कोरिन्थी to मा फर्कौं र विचार गर्नुहोस् कि पावलले कोरिन्थीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक र भौतिक उदारताको बारेमा के सिकाउँथे। "यसैले तपाईं सबै कुरामा धनी बन्नुहुनेछ, हामी सबै चीजहरू दिनुहोस् जुन परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएर हामी मार्फत काम गर्दछ। किनकि यस स of्ग्रहको सेवाले केवल सन्तहरूको अभावलाई मात्र समाधान गर्दैन, तर विस्मयकारी ढ many्गमा धेरैलाई धन्यवाद दिन्छ भगवान्लाई पनि। (V. 11-12)
पावलले कोरिन्थीहरूलाई सम्झाए कि तिनीहरूको उदारता केवल मानवीय प्रयास मात्र होइन - यसको ईश्वरशास्त्रीय परिणामहरू छन्। मानिसहरूले यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन् किनकि उनीहरूले बुझ्दछन् कि परमेश्वर मानिसहरू मार्फत काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले ती मानिसहरुमा राख्नु भएको छ जसले हृदयलाई दिनु पर्छ। यस प्रकारले परमेश्वरको काम सम्पन्न भएको छ। "यस विश्वासी सेवाका लागि तिनीहरूले ख्रीष्टको सुसमाचारप्रति तपाईंको आज्ञाकारिता र उहाँहरू र सबैसँगको तपाईंको स of्गतीको सरलताको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्"। (V. 13) यस बिन्दुमा त्यहाँ धेरै उल्लेखनीय बुँदाहरू छन्। पहिलो, कोरिन्थीहरूले आफ्ना कार्यहरूद्वारा आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्षम भए। तिनीहरूले आफ्नो कामहरू देखाए कि तिनीहरूको विश्वास वास्तविक थियो। दोस्रो, उदारताले मात्र धन्यवादमा परिणाम गर्दैन, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिन्छ। यो उपासनाको तरीका हो। तेस्रो, अनुग्रहको सुसमाचारलाई ग्रहण गर्न केही आज्ञाकारिता पनि आवश्यक पर्दछ, र त्यो आज्ञाकारिता शारीरिक श्रोतहरू साझा गर्नु हो।
सुसमाचारको लागि दिने
अनिकाल कम गर्ने प्रयासको सन्दर्भमा पावलले उदारतासाथ दिनेबारे लेखे। तर यही सिद्धान्त आजको चर्चमा भएको आर्थिक संग्रहमा पनि लागू हुन्छ जुन सुसमाचारको सेवा र चर्चको सेवाकार्यलाई समर्थन गर्दछ। हामी महत्त्वपूर्ण कामलाई समर्थन गर्न जारी राख्छौं। यसले सुसमाचार प्रचार गर्ने काम गर्नेहरूलाई सुसमाचारबाट बाँच्नको लागि जति सक्दो राम्रो गर्न सक्दछ।
ईश्वरले उदारतालाई इनाम दिनुहुन्छ। यो अझै स्वर्ग र अनन्त आनन्द को खजाना दिन्छ। सुसमाचार अझै हाम्रो वित्त मा मांग गरिरहेको थियो। पैसाप्रति हाम्रो दृष्टिकोणले अझै पनि परमेश्वरले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास झल्काउँछ कि अहिले र सदासर्वदा। आज पनि हामीले गरिरहेका त्यागहरूको लागि मानिसहरूले अझै पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद र धन्यवाद दिन्छन्।
हामीले चर्चलाई दिने पैसाबाट हामी आशिष्‌ पाउँछौं - अनुदानले हामीलाई सभा कोठाको भाडा तिर्न, पशुधनको हेरचाह र प्रकाशनहरूको लागि सहयोग पुर्‍याउँछ। तर हाम्रो चन्दाले अरूलाई पनि अरूलाई साहित्य प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, स्थान प्रदान गर्न जहाँ मानिसहरूले पापीहरूलाई प्रेम गर्ने विश्वासीहरूको समुदाय चिन्न सक्छन्; विश्वास गर्नेहरूको एउटा समूहलाई भुक्तान गर्न जसले एक मौसम तयार गर्छन् जसलाई नयाँ आगन्तुकहरूले मुक्तिको बारेमा सिकाउन सकिन्छ।
तपाईं यी मानिसहरूलाई चिन्नुहुन्छ होईन (अझै), तर तिनीहरू तपाईप्रति आभारी हुनेछ - वा कमसेकम तपाईंको जीवित बलिदानको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण काम हो। हाम्रो उद्धारकको रूपमा ख्रीष्टलाई स्वीकार गरेपछि हामीले यस जीवनमा गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परमेश्वरको राज्यको विकास गर्न, भगवानलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिएर भिन्नता ल्याउन हो।
म पद १ 14-१-15 मा पावलका शब्दहरूसँगै टु .्ग्न चाहन्छु: «र उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दा उनीहरू तपाईंको निम्ति तिर्सना गर्छन् किनभने तपाईंसँग परमेश्वरको असीम अनुग्रहको कारण। तर उनको अकथनीय उपहारको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद!